PoEdit tutorial: အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များကိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း Linux မှ
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ရှုပါကသင်သည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောခရမ်းချဉ်သီးသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည် ဘာသာ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့် ... သည်းခံခြင်း။ အရာအားလုံးကိုအချိန်နှင့်ဆန္ဒဖြင့်သင်ယူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သဲလုံးများကိုကမ္ဘာသို့ဖြည့်ဆည်းရန်ဘာသာပြန်လိုပါက အခမဲ့ဆော့ဝဲ (သို့မဟုတ်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ဘာသာစကားရွေးချယ်စရာများထည့်ရန်ကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်သည်) ။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာမန်စာသားတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းကိုအခြားဘာသာစကားသို့လွှဲပြောင်းရန်) သင် (ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သကဲ့သို့) သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်
ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးမရှုပ်ထွေးပါဘူး။ ဤအကျဉ်းချုပ်လိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအများဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည်၊ ဖိုင် ပုံစံ .အိုး ဘာသာပြန်ရန်။
၎င်းသည် Daniel Durante မှအလှူငွေများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။Linux အကြောင်းသင်သိသမျှကိုမျှဝေပါ«။ ဂုဏ်ယူပါတယ် Daniel!
1 PoEdit ဆိုတာဘာလဲ။
4 တပ်ဆင်မှုနှင့် configuration
5 .po ဖိုင်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
Poedit သည်ဘာသာပြန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသတိထားပါ၊ ဘာသာပြန်သူနှင့်ရှုပ်ထွေးမသွားပါစေနှင့်။
တူညီတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တခြားပရိုဂရမ်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ PoEdit အကျဆုံးအကျဆုံးဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ PoEdit သည်ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဘာသာစကားတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့စာသားများကိုဘာသာပြန်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘာသာစကားဖြင့်စာလုံးညှို့များနှင့်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုလိုချင်သောဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်တွေးစရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုသည်။ gedit သို့မဟုတ် windows notepad ကဲ့သို့စာသားအယ်ဒီတာများကိုဘာကြောင့်တိုက်ရိုက်သုံးမလဲ။ အဖြေသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ PoEdit သည်ဘာသာပြန်ထားသောညှို့များအား html, php code စသဖြင့်သိုလှောင်ထားသည့်ဆာဗာ၏လမ်းညွှန်များတွင်တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်ပြင်ဆင်ထားသောပုံစံဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်ဖိုင်လမ်းညွှန်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဘာသာပြန်ဖိုင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာပြန်များကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်ထားသောဤလမ်းညွှန်များတွင် (နှင့်များသောအားဖြင့်) ဖိုင်တစ်ခုထက် ပို၍ ရှိနိုင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ ဖိုင်တစ်ခုစီတွင်ဘာသာပြန်တစ်ခု၏သတ်မှတ်ထားသောဘာသာစကားအတွက်မည်သည့်အရာနှင့်မည်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုသည်ဟူသောအချက်အလက်များပါရှိသည်။
PoEdit ကိုင်တွယ်သောဖိုင်များသည် template ဖိုင်များဖြစ်သည်။ extension .pot၊ ဘာသာပြန်ဖိုင်များဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ပို .XNUMX နှင့် file.mo နှင့်အဆုံးသတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်အောင်လုပ်စေသောပြုစုထားသောဖိုင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် PoEdit configuration ကိုအတွက်သတ်မှတ်လျှင်အဆုံးစွန်သောအလိုအလျောက်ဖန်တီးနေကြသည်။
PoEdit ကို GNU / Linux, Windows နှင့် Mac OS X အတွက်ဗားရှင်းများတွင်တည်ရှိသည်။
word processor သည် template ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ PoEdit သည်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ template file တွင်ဘာသာပြန်ထားသောညှို့များနှင့်အချို့သောဒေတာအတွက်နေရာချထားသောနေရာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သောအခါတွင်ဖြည့်စွက်လိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်များသည်မူရင်းနှင့်ဘာသာပြန်ထားသောပကတိညှို့များအပြင်ဥပမာအားဖြင့်၊ နောက်ဆုံးဘာသာပြန်၏အမည်ဖြစ်သည် (လုပ်ငန်းကိုဘာသာပြန်သူမှအစပြုနိုင်သော်လည်းဘာသာပြန်သူမှမပြီးနိုင်)၊ ဘာသာပြန်အဖွဲ့၏အမည်၊ ဇာတ်ကောင်အစု, etc ၎င်းတို့သည်ဘာသာပြန်ဖိုင်နှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသော metadata များနှင့်တူသည်။
သင် template ကိုမိတ္တူတစ်ခု၌အခြားဖိုင်တစ်ခုသို့ပြုလုပ်ပါ။ တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်အတူတူပါပဲ ။po ကောင်းပြီ၊ တူညီသောနည်းဖြင့်မဟုတ်ပါ၊
မူရင်းကိုဘာသာပြန်ပြီးပြန်ဆိုပါက extension ဖိုင်မတိုင်မီ template file name ၏အဆုံးတွင်ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသောကုဒ်ကိုထည့်ရမည်။
ဝဘ်ဆိုက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆိုပါစို့။ ၎င်း၏အဓိကစာမျက်နှာကို index.html ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကိုဘာသာပြန်ရန်အတွက် index.pot ဟုခေါ်သော template ဖိုင်ရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ index.pot ဖိုင်ရှိသည့်အခါစပိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာပြန်တော့မည့်ဘာသာစကားဖြစ်လျှင်၎င်းကို index.es.po ဟုအမည်ပြောင်းလိုက်သည်။
ဖိုင်ကိုထိုနည်းအတိုင်းအမည်ပေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည် PoEdit နှင့်စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် .po ဖိုင်၏အပိုင်းအစများသင်ဘာသာပြန်ရန်လိုသည့်စာသားများကိုတွေ့နိုင်သည်။ (၎င်းသည်ကောက်နုတ်ချက်များတွင်ပကတိ msgid အတိုင်းလိုက်နာသည်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ PoEdit နှင့်ဘာသာပြန်ထားသော string များမည်သည့်နေရာတွင်သွားမည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ စာသားအတိုင်းလိုက်နာသောကိုးကား) msgid ။
မေးခွန်းပေါ်လာပြီး .po file ကိုငါ edit လုပ်၍ msgstr နောက်သို့လိုက်သော quotation mark များအကြားတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါကအဖြေမှာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PoEdit နှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ပို၍ စနစ်ကျသော်လည်း၎င်းကိုဖော်ပြရန်မပြောပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အရင်ကပြောဆိုခဲ့သည့် metadata များကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို PoEdit သို့ထားလိုက်ပါကပိုကောင်းသည်။ ထို့အပြင် compile .mo ဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်လည်းရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
အောက်ပါပုံတွင်ဖိုင်နှင့်ပတ်သက်သော metadata ပေါ်လာသည့် .po file ၏ header ကိုသင်တွေ့ရသည် -
.pot ဖိုင်တွင်ဤ metadata သည်အချက်အလက်များမပါ ၀ င်ပါ။ .po ဖိုင်တွင်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကိုရည်ညွှန်းသည့်သတင်းအချက်အလက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
PoEdit သည် Debian 6.0 stable / main အတွက် GNU / Linux application repositories တွင်ပါဝင်သည်။ .deb packages များပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အခြား distros များအတွက်လည်း၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းသည် Synaptic (သို့) apt command line manager ကဲ့သို့သော application များကိုပုံစံဖြင့်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
apt-get installed poedit
၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာကိုထည့်မည့် Edition → Preferences တွင်ထည့်သွင်းရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျန်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့မူအရ Poedit တင်ပြသည့်အတိုင်းမူအရထားခဲ့ပါ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ file ကို Catalog-> Options ထဲတွင်အောက်ပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ configure:
Plural Forms အပိုင်းကို nplurals =2နှင့်ဖြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ ! n ၏အများကိန်း = 1; သင်ကြွင်းသောအရာအားကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ထားမည်။
Folders tab တွင်ဘာသာပြန်များရှိလိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လိမ့်မည်။
၎င်းကိုလုပ်ပြီးပါက .po ဖိုင်ကိုစာသားတည်းဖြတ်သူနှင့်ဖွင့်လိုသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွန်းသည့် meta-data ပြောင်းလဲသွားသည်။
အားလုံး PoEdit မျက်နှာပြင်တွင်အောက်ပါပုံစံနှင့်ဆင်တူသည့်စာသားများကိုဘာသာပြန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
ကျနော်တို့ဘာသာပြန်ထားသောနှင့်အောက်ပိုင်းပြတင်းပေါက်တွင်အထက်ပေါ်လာ string ကို၏ဘာသာပြန်ချက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာ။ အပြောင်းအလဲများကိုသာသိမ်းဆည်းရန်ကျန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် string ၏ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသော်လည်း၎င်းသည်မည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအခါ၎င်းကို fuzzy ဟုမှတ်ရမည်။ ဤကိစ္စတွင်ဘာသာပြန်သည်မပြည့်စုံပါ။ .po ဖိုင်သည်ထိုစာကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည့်အခြားဘာသာပြန်သူထံသို့ပို့နိုင်သည် (အမှန်တကယ်တွင်ဘာသာပြန်သူများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများအနေနှင့်အားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည်)
ကောင်းပြီ၊ ဒီနည်းပြသင်ခန်းစာအဆုံးမှာစာသားအပြည့်အစုံဟာအသုံး ၀ င်တယ်၊ PoEdit တင်ပြတဲ့အတိုင်းလိုင်းများနဲ့မဖွဲ့စည်းဘူးဆိုတာငါပြောမယ်။
စာသားကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်သာထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် po2txt command ကိုအသုံးပြုသည်။
po2txt -w 75 ကို item-name.es.po ကို item-name.es.txt
-w 75 သည်မျဉ်းကြောင်း၏ ၇၅ လုံးရှိကြောင်းဖော်ပြသည်
(သင့်တွင် gettext နှင့် translate-toolkit အစုံများထည့်သွင်းထားရမည်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » PoEdit သင်ခန်းစာ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရောဂျက်များကိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း
Pehuén Raineri ဟုသူကပြောသည်
AL ငါ poedit ငါကောင်းစွာယူ, ရှင်းပြချက်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါပေမယ့်ငါစာသား extract လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသူကအမှားတစ်ခုပစ်။ ငါဖိုင်မှလမ်းကြောင်းထားရန်ရှိသည်?
user @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 English.po English.txt
ဖိုင် ၁ ခုကိုပြုပြင်နေသည်
po2txt: warning: မှားယွင်းစွာပြုပြင်ခြင်း: Input English.po၊ output English.txt, template တစ်ခုမှမရှိပါ။ [Errno 2] ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ - 'English.po'
အသုံးပြုသူ @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 ^ Cglish.po English.txt
Pehuén Raineri အားစာပြန်ပါ
Xa လုပ်ပါ ဟုသူကပြောသည်
၀ က်ဘ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ကွန်ပျူတာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ မိုဘိုင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုမဆိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ဤမြန်ဆန်။ အလိုအလျောက်ရှာဖွေခြင်းကိရိယာကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ http://poeditor.com/.
Do Xa အားပြန်ပြောပါ
ငါဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာရှုံးနိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနားမလည်ဘူး၊ ဒီဖိုင်တွေကဘာတွေလဲ။
ကွဲပြားခြားနားသောပရိုဂရမ်များ၏ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်စီမံကိန်းကိုအခြားဘာသာစကားများ (Pidgin, Qcomicbook စသည်ဖြင့်) သို့ဘာသာပြန်လိုသောအခါတွင်အသုံးပြုသောစံသည်ဤဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဆောင်းပါးတွင်ရှင်းပြထားသည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်စေသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
သင်၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၌သံသယများစွာကိုရှင်းလင်းစေပါသည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့သောစီမံကိန်းများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရန်သို့မဟုတ် Launchpad တွင် Marlin လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့, အများစုအတွက် .po format ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးယင်း၏ထုတ်ဝေမှုများကိုမူဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ နားမလည်ဘူး
တစ်စုံတစ် ဦး ကအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်
Google နှင့် Microsoft နှစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဘာသာပြန်ဆိုသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိသည်။
Diego bruschetti ဟုသူကပြောသည်
OmegaT လိုပရိုဂရမ်များလား။ ဒါအလုပ်မလုပ်ဘူးလား
Diego Bruschetti အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင်စပိန်အခြေစိုက်စပိန်ဘာသာစကား (စပိန်) တွင်ပုံမှန် .po ရှိသည်။ ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ် en_EN သို့ဘာသာပြန်ရန်အခြားတစ်ခုဖန်တီးနေသည်။ ကျွန်ုပ်မသိသောအရာသည်ဘာသာပြန်များမှန်ကန်စွာဖွင့်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ it ည့်သည်ရဲ့ browser ၏ဘာသာစကားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်တင်ပါသလား။ သင်တစ် ဦး အလယ်အလတ်ဖိုင်ကိုဖန်တီးသင့်သလဲ ပုံမှန်အလံများကိုထည့်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်နှိပ်ရမည်၊ မည်သည့်ဘာသာပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုတင်ရမည်နည်း။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ အောက်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုသိနေသလို poedit ကိုစသုံးတော့တယ် ။(
မှတ်ချက်။ ။ ငါ poedit ကို Windows764bits နှင့် .po ဘာသာဖြင့် (catalog အသစ်ကိုဖန်တီးစဉ်) တွင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် dropdown မရခဲ့ပါ။ စပိန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုထားတယ်
ဟယ်လို! အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့် software အမျိုးအစားကိုမဆိုရှာဖွေလိုလျှင်ဤမြန်ဆန်။ အလိုအလျောက်ရှာဖွေသော tool ကိုကျွန်ုပ်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ http://poeditor.com/.
စာသားတွေကိုဘာသာပြန်ဖို့ poedit ကိုသုံးတယ်။ ငါဘာသာပြန်ထားတဲ့အက္ခရာတွေကိုဘယ်လိုရေတွက်မလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ဘာသာပြန်ပြီးတာနဲ့စုဆောင်းဖို့အကောင့်တွေလုပ်နိုင်တယ်။ ဘာသာပြန်တဲ့စာလုံးအရေအတွက်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။ ... ။ ဒါကိုလုပ်လို့ရလား
အဆိုပါ gpl လိုင်စင်ကိုဖတ်ပါ
သင်မလုပ်နိုင်ပါ၊ ထိုစာကြောင်းများကိုစာသားတည်းဖြတ်သူ (အခမဲ့ရုံးစာရေးသူ၊ စာလုံးအစရှိသဖြင့်) သို့ကူးယူခြင်းဖြင့်စာကြောင်းများရှိဇာတ်ကောင်အရေအတွက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
သင်သည်အခြားဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုလိုပါက Catalog-Properties: Plural Forms ၀ င်းဒိုးတွင်အများကိန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
KDE တွင်Trojitá, IMAP အီးမေးလ်ဂလိုင်းပါဝင်သည်